खानपान सुविधाहरु। वर्गीकरण
मिति, व्यवसायी र संगठन को एक ठूलो संख्या entrepreneurial गतिविधि भित्र खानपान खुल्छ। यी कम्पनीहरु अवकाश को र राम्रो पोषण, विभिन्न आकार, प्रकार को आराम मा आवश्यकता पूरा गर्न डिजाइन र सेवा को प्रकार प्रदान।
मानक अनुसार, उद्यम खानपान तिनीहरूलाई लागू गर्न, र (वा) खपत व्यवस्थित गर्न पाक, मिठाई र अन्य उत्पादनहरु बनाउन डिजाइन गर्दै छन् संस्थाहरूको छन्। हामीलाई थप विवरण तिनीहरूलाई विचार गरौं।
सार्वजनिक खानपान कम्पनीहरु विभिन्न आधार मा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ:
1 भोजनालय - उत्पादन, जो त्यहाँ व्यञ्जन एक अधिकतम दायरा, निर्माण गर्न गाह्रो छ। यो पनि ब्रांडेड समावेश र अनुकूलन, मिठाई र सुर्ती उत्पादन, पेय को एक किसिम। यो संरचना खानपान एक उच्च जो गर्नुपर्छ अवकाश र मनोरञ्जनको संगठन संग संयुक्त गर्न, सान्त्वना र सेवा को स्तर छ।
2. पट्टी बलियो मादक मिश्रित, शीतल पेय, लागू स्थापनाको छ मादक पेय, र मिठाईहरू, छिटो नाश्ता, मिठाई र अन्य उत्पादनहरु। यो आवश्यक लगातार हुनुपर्छ।
3. कफी जो अवकाश र खाना उपभोक्ताहरु को संगठनमा सेवाहरू प्रदान गर्दछ एक विशेष कम्पनी हो। यो रेस्टुरेन्ट उत्पादनहरु को दायरामा तुलनामा सीमित प्रदान गर्दछ। यो क्याफे सामान्यतया अनुकूलित कार्यान्वयन हुन्छ, ब्रांडेड र मूल व्यञ्जन, पेय पदार्थ र अन्य उत्पादनहरु।
4 भोजन कक्ष - किफायती र उत्पादन र अनुसार सेट मेनु संग खाना बेच्छ एउटा उद्यम नागरिक को विशिष्ट आकस्मिक गर्न caters। यसलाई विविध हुनुपर्छ र हप्ताको दिनको लागि तयार हुन।
5 खाना सरल पकाउने सीमित दायरा भएको संगठन हो। मेनु कच्चा माल केहि प्रकारको देखि बनेको छ। यस्तो खानपान पर्यटकहरूलाई द्रुत सेवाहरूको लागि चाहनुभएको। हाल, सबै देशहरूमा विभिन्न प्रकारका (छिटो खाना आउटलेट, पिज्जेरियाहरूमा र यति मा) द्वारा प्रतिनिधित्व गर्दै छन्।
यी बाहेक, थप यो क्षेत्र मा वस्तुहरु को एक नम्बर हाइलाइट:
1 आहार भोजन - कम्पनीहरु छ कि सृष्टिको र कम क्यालोरी खाना खाने को कार्यान्वयन विशेषज्ञ।
2. भोजन-ड - समाप्त उत्पादन (अक्सर, बेच्छ पीठो उत्पादन र द्रुत नाश्ता), अन्य खानपान उद्यम प्राप्त गर्दछ जो।
3. Buffets संगठन को एक संरचनात्मक विभाजन हो। तिनीहरूले लागू गर्न अभिप्रेरित छन् केक, टुक्रा सामान र सरल पकाउने सीमित दायरा।
कम्पनी को विशेषताहरु पहिलो, सर्वोच्च, र "लक्जरी": यस्तो रेस्टुरेन्ट वा बार रूपमा खानपान प्रकार, को स्थापित कक्षाहरू आधारमा बाहिर छ। हामीलाई थप विवरण तिनीहरूलाई विचार गरौं।
एक परिष्कृत भित्री, सहज वातावरण, प्रस्ताव र सेवाहरूको इष्टतम दायरा, मेनु एक विस्तृत विविधता संग: एक वर्ग "लक्स" को लागि द्वारा विशेषता छ।
माथिल्लो वर्ग एक मूल भित्री र सेवाहरू, विभिन्न विविधता, संरक्षित र पेय संग मेनू को सीमा छ।
ग्राहकहरु, पेय को एक विस्तृत सहज भित्री प्रदान सेवाहरु को एक विविध वर्गीकरण परिभाषित सीमा: पहिलो वर्ग द्वारा विशेषता छ।
उद्यमी को संरचना खानपान निम्न विशेषताहरु मा भिन्न भिन्न हुन्छ:
उत्पादनहरु को दायरा,
एक विशेष वर्ग को स्थिति को पुष्टि, र अनुसार व्यवस्था संग विशेष एजेन्सीहरू उत्पादन गरिएको छ।
नेट निश्चित सम्पत्ति
सकल लाभ के हो
घर मा6वर्ष को बच्चा संग के गर्न। बच्चाहरु घर को 6-7 वर्षसम्म कक्षाहरू
"सम्राट्लाई" Machiavelli: को पुनर्जागरण को एक प्रतिबिम्ब रूपमा पुस्तकको छोटो सामग्री
Gudauri स्की रिसोर्ट: समीक्षा र फोटो
फोम ब्लक बाहिर एक घर निर्माण: लागत-प्रभावकारी छिटो, सजिलो!
JSC "Balashikha कास्टिङ-यांत्रिक प्लान्ट" (BLMZ): उत्पादनहरु, ठेगाना, दिशा निर्देशन